17 deeqda waxbarasho ee ugufiican ee si buuxda loo maalgaliyo 2021/2022 Cusbooneysiinta Xariirka: Warka Dugsiga ee Hadda
17 Deeqaha Injineerinka ee si buuxda u Maalgaliya 2021/2022 Cusbooneysiinta Xariirka
17 deeqaha injineernimada si buuxda loo maalgeliyo: Waxbarashada iyo macluumaadka ay sheegaan inay yihiin awood. Waa wax fiican inaan ka wada hadli doonno qodobkan.
Qodobkaan, waxaa jira macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qaar ka mid ah deeqaha injineernimada oo si buuxda loo maalgeliyo. Sidaa darteed, haddii aad raadineysay deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda injineernimada, fadlan akhri.
17 Deeqaha injineernimada ee si buuxda loo maalgeliyo
Hoos waxaa ku yaal qaar si buuxda loo maalgeliyey scholarships:
1. Oxford-Weidenfeld iyo Barnaamijka Hoffmann Scholarship iyo Leadership
Deeqdani waxay taageertaa ardayda wanaagsan. Sidoo kale, waxay ka caawisaa kuwa ka soo gudbaya iyo dhaqaalaha soo koraya ee Afrika oo dhan. Intaa waxaa sii dheer, dhammaan Aasiya iyo Koonfurta Ameerika. Tani waa in lagu sii wado shahaadada qalin-jabinta ee Jaamacadda Oxford. Sidoo kale, waxaa maamula Weidenfeld-Hoffmann Trust.
Hay'adda martigalinta (s)
Jaamacadda Oxford, Boqortooyada Ingiriiska.
Heerka / Field (s) ee Daraasadda
Waxay diiradda saaraysaa koorsooyinka injineernimada ee Beeraha, daryeelka caafimaadka, deegaanka, iyo maaraynta biyaha. Sidoo kale, dhaqaalaha, siyaasadda guud iyo arrimaha dibadda.
Waxay bartilmaameedsataa ardayda ka gudubka iyo dhaqaalaha soo koraya ee Afrika oo dhan. Sidoo kale, iyada oo loo marayo Aasiya iyo Koonfurta Ameerika.
The deeq waxbarasho wuxuu daboolayaa 100% khidmadaha Jaamacadda. Sidoo kale, waxay daboolaysaa khidmadaha kuleejka iyo deeqda kharashka nolosha. Tani waa ugu yaraan £ 14,777. Sidoo kale, abaalmarinno ayaa loo sameeyaa muddada buuxda ee mas'uuliyadda khidmaddaada ee koorsada lagu heshiiyey. Tani waa mid ka mid ah 17-ka ugu wanaagsan ee si buuxda loo maalgeliyey scholarships
Si aad xaq ugu yeelato:
Waa inaad caadi ahaan deggenahay mid ka mid ah waddamada u-qalma.
Sidoo kale, waa inaad ku talo jirtaa inaad ku noqoto waddankaagii aad degganayd ee caadiga ahaa. Tani waa marka koorsadaada la dhammeeyo.
Fadlan la soco tan. Codsadeyaasha guuleysta waa inay muujiyaan xiisaha ay u qabaan bulshada adduunka. Tanina waxay ku imaaneysaa shaqadooda ay doorteen. Sidoo kale, waa inay awoodaan inay muujiyaan isku xirnaanshaha maaddadooda daraasadda iyo ujeeddooyinka mustaqbalka fog.
Sidaa darteed, sharraxaadda sida ay u arkaan shaqadooda mihnadeed inay gacan ka geysaneyso horumarinta nolosha dadweynaha. Sidoo kale, kani wuxuu ku yaal waddankoodii asalka ahaa. Ama heer gobol ama heer caalami oo ballaaran.
Waad booqan kartaa bogga rasmiga ah ee deeqda waxbarasho Halkan
2. Heinrich Böll Stiftung: Aasaaska Siyaasadda Cagaaran
Tani deeq waxbarasho waxaa loogu talagalay ardayda ka qalin jabisay iyo kuwa takhasuska leh ee ka yimid meel ka baxsan Jarmalka. Xilliga kama dambaysta ah ee codsigu waa 1 Maarso. Fadlan ogow: Kaliya codsiyada internetka ayaa la aqbalaa.
Sidoo kale, bogga dalabka ayaa la furi doonaa qiyaastii 6 usbuuc ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga. Iyo, kani waa mid ka mid ah 17-ka ugu wanaagsan ee injineernimada si buuxda loo maalgaliyo deeq waxbarasho.
Si kastaba ha noqotee, codsadayaasha caalamiga ah waa inay caddeeyaan aqoontooda Jarmalka. Sidoo kale, aqoon wanaagsan ama aad u wanaagsan oo luqadda Jarmalka ah ayaa loo baahan yahay. Iyo ugu yaraan Heerka B2 ama DSH2.
saacadaha shaqada: Mo, Tu, Thu, Fr 10-13 Uhr
Fadlan ogow: Kaliya codsiyada khadka tooska ah ayaa la aqbalaa.
1. Ururi macluumaad ku saabsan habka arjiga iyo dukumintiyada la codsaday.
2. Sidoo kale, iska diiwaangeli shabakada codsiga internetka.
3. Intaa waxaa sii dheer, ku bixi macluumaadka la codsaday Barta Codsiga ee Internetka.
4. Intaa waxaa sii dheer, ka dib markaad geliso dhammaan dukumiintiyadaada, soo gudbi arjigaaga. Tani waa inay ahaataa kahor dhamaadka waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga.
3. Edinburgh Deeqaha Cilmi-baarista Caalamiga ah
Jaamacadda Edinburgh waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo 30 ah. Sidoo kale, kuwani waxaa loogu talagalay Barnaamijka Cilmibaarista PhD dhinac kasta oo waxbarasho ah. Si kastaba ha noqotee, waa inay bixiyaan Jaamacada kalfadhiga tacliinta ee 2020-2021.
Jaamacadda Edinburgh, UK.
Ph.D. Barnaamijka qayb kasta oo daraasad ah oo laga bixiyo Jaamacadda.
Ardayda caalamiga ah.
Mid kasta oo deeq waxbarasho daboolayaa farqiga u dhexeeya khidmadda waxbarashada ee a UK/EU arday qalin jabiyay. Sidoo kale, taasna waxaa lagu dallacayaa arday ka qalin jabiyay dibedda. Si kastaba ha noqotee, abaalmarinnadu ma daboosho kharashyada dayactirka.
Sidoo kale, iyadoo lagu saleynayo horumar lagu qanco, abaalmarinnada waa la xisaabtami karaa illaa saddex sano.
Abaalmarinnadu waxay u furan yihiin muwaadiniinta dibedda ka bilaabeysa Ph.D. qayb kasta oo daraasad ah 2020-2021. Si kastaba ha noqotee:
Codsadeyaashu waa inay masuul ka noqdaan inay bixiyaan khidmadaha waxbarashada. Tani waa heerka lagu dabaqi karo ardayda dibedda. Waana in lagu dalbaday gelitaan waqti-buuxa ah Ph.D. barnaamijka cilmi baarista.
Sidoo kale, codsadayaashu waa inay ahaadaan kuwo tayo sare leh iyo karti cilmi baaris. Si kastaba ha noqotee, musharrixiinta leh fasalka labaad ee sare waxay sharfayaan shahaadada Bachelor-ka (ama kuwa u dhigma dibadda) waa la tixgelin karaa. Marka, si aad u noqoto qof tartamaya, waa inaad runtii haysataa shahaadada koowaad ee heerka koowaad ee Bachelor-ka. Tanna waa in lagu kabaa shahaadada Master-ka oo aad u fiican.
Intaas waxaa sii dheer, arrimo kale sida xaaladda dhaqaale, dhalasho, iyo daraasadda la soo jeediyay lama tixgelinayo.
Codsadayaasha u qalma waa inay ku dhammaystiraan arjiga deeqda waxbarasho ee internetka 23:59 GMT 17 Febraayo 2021.
Sidoo kale, waa muhiim inaad booqato bogga rasmiga ah. Tani waa in la helo foomka dalabka. Sidoo kale, iyo faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan sida loo codsado tan deeq waxbarasho. Intaa waxaa sii dheer, si loo helo foomka dalabka tooska ah.
17 Feb 2021 (sanadle). Sidoo kale, koorsadu waxay bilaabmaysaa Sebtember 2021.
Website-ka deeq waxbarasho oo rasmi ah: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/global/research
4. UEA Deeqaha Waxbarashada Caalamiga ah ee Ardayda Caalamiga ah
Tani waa mid ka mid ah 17 deeqaha injineernimada si buuxda loo maalgeliyo. Sidoo kale, tani waa hal deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee ku wajahan koorsooyinka Degree-ga ee ay bixiso Iskuulka Horumarinta Caalamiga.
Iskuulka Horumarinta Caalamiga, Jaamacadda Bariga Anglia ee Boqortooyada Midowday.
Deeqaha waxbarasho waxaa lagu bixiyaa iyadoo lagu saleynayo heer sare oo tacliimeed. Tusaale: Darajada koowaad. Iyo bayaankooda shaqsiyadeed. Sidoo kale, codsadayaasha waxaa laga filayaa inay buuxiyaan shuruudaha luuqadda Ingiriisiga ee Dugsiga. Oo la siiyay lana aqbalay boos koorsada waqtiga kama dambaysta ah.
Dhammaan musharrixiinta u qalma ee Dugsigu u soo bandhigay dalab ayaa si otomaatig ah loogu tixgeliyaa magacaabista. Waqtiga kama dambaysta ah ee codsiyada ayaa ah 28 Febraayo 2021.
Website-ka deeq waxbarasho oo rasmi ah: https://www.uea.ac.uk/study-with-us-restructured/postgraduate/scholarships/social-sciences/international-development/full-fees-scholarship/
28 Feb 2021 (sanadle). Sidoo kale, koorsadu waxay bilaabmaysaa Sebtember 2021.
5. Jaamacada Sussex ee Deeqaha Caalamiga ah
Deeqdan waxbarasho ayaa laga heli karaa inta badan Dugsiyada Sussex. Sidoo kale, waxaana lagu abaalmariyaa iyadoo lagu saleynayo waxqabadka akadeemiyadeed. Iyo kartida ardayda caalamiga ah ee aan EU-da ahayn ee codsaday oo lasiiyay boos loogu talagalay shahaadada jaamacadeed ee waqtiga buuxa ee jaamacadda Sussex.
Jaamacadda Sussex, Boqortooyada Ingiriiska.
Deeqdani waxay daboolayaan barnaamijyada Master-ka ee buuxa ee lagu bixiyo Jaamacadda Sussex Dugsiyada.
Ardayda non-UK / EU ee caalamiga ah.
Deeqda waxbarasho ayaa ah 50% ka goynta khidmadda waxbarashada ardayda caalamiga ah. Sidoo kale, deeqaha waxbarasho ayaa la siiyaa hal sano oo waxbarasho ah.
Si aad ugu qalantid deeqdan waxbarasho:
1. Waa in laguu aqoonsadaa inaad dibada tahay ujeedooyin khidmad ah.
2. Sidoo kale, waa inuu aqbalay boos Masters-ka buuxa oo xaq u leh. Ka bilaabida Jaamacadda Sussex Sebtember 2020.
3. Intaa waxaa sii dheer, waa inuu leeyahay buundooyin aad u fiican. Ama, fasalka koowaad ee UK ama u dhigma.
4. Intaas waxaa sii dheer, waa inuu leeyahay hadafyo cadcad oo cayiman. Iyada oo leh xiriirin qeexan oo ku saabsan koorsadaada.
Si loo tixgeliyo deeqda waxbarasho ee Chancellor-ka, fadlan la soco tan. Waxaad ubaahantahay inaadhesho oo aad aqbasho dalab boos ah oo aad kaheleyso Masters oo xaq uleh Sussex. Sidoo kale, si aad u dalbato, waa inaad buuxisaa foomka dalabka tooska ah. Waqtiga kama dambaysta ah waa 1 Maajo 2020 23:59 GMT.
Website-ka deeq waxbarasho oo rasmi ah: Riix Halkan
1 Meey 2021 (sanadle). Sidoo kale, Koorsadu waxay bilaabmaysaa Sebtember 2021.
6. Amsterdam Deeqaha Sare (AES)
Deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay ardayda kartida gaarka ah leh. Sidoo kale, waxay u yihiin kuwa ka baxsan Yurub. Ujeeddadu waa in la sii wado Barnaamijyada Master-ka ee u qalma ee laga bixiyo Jaamacadda Amsterdam.
Jaamacadda Amsterdam ee Holland.
Barnaamijka "Masters English Master" ee Barnaamijka "Masters Program" ee lagu bixiyo buundooyinka soo socda:
Horumarinta Caruurta iyo Waxbarashada.
Sidoo kale, Isgaarsiinta.
Intaas waxaa sii dheer, Dhaqaalaha iyo Ganacsiga.
Sidoo kale, Bani'aadamka.
Intaa waxaa dheer, Sharciga.
Sidoo kale, cilmu-nafsiga.
Intaa waxaa sii dheer, Sayniska.
Sidoo kale, Cilmiga bulshada.
Ardayda Caalamiga ah ee aan ka tirsaneyn EU / EEA
AES waa deeq waxbarasho oo buuxda oo ah € 25,000. Sidoo kale, waxay ka kooban tahay kharashka waxbarashada iyo nolosha. Tanina waa hal sano oo waxbarasho. Iyada oo ay suurtagal tahay in loo kordhiyo sanadka labaad barnaamijyada Master-ka ee labada sano ah.
Ardayda aan ka tirsaneyn Midowga Yurub ee ka socota edbin kasta oo ka qalin jabisay 10% ugu sarreysa fasalkooda way dalban karaan. Sidoo kale, xulashadu waxay ku saleysan tahay heer sare tacliimeed. Hamiga iyo ku xirnaanta barnaamijka Master ee la xushay ee mustaqbalka ardayga mustaqbalkiisa.
Codsiyada waxaa lagu sameeyaa Xafiisyada Ogolaanshaha ee Dugsiyada Qalinjabinta. Sidoo kale, waxaad ka heli kartaa shuruudaha u-qalmitaanka gaarka ah, shuruudaha xulashada, iyo tilmaamaha dalabyada websaydhka Dugsiga Sare.
Intaa waxaa sii dheer, waqtiyada kama dambaysta ah ee AES way kala duwan yihiin. Way ku kala duwan tahay Dugsi Sare. Laakiin waa 15 Janaayo 2021 ama 1 Febraayo 2021.
Website-ka deeq waxbarasho oo rasmi ah: http://www.uva.nl/en/education/master-s/scholarships–tuition/scholarships-and-loans/amsterdam-excellence-scholarship/amsterdam-excellence-scholarship.html
15 Jan / 1 Feb 2021 (sanadle). Sidoo kale, koorsadu waxay bilaabmaysaa Sebtember 2021.
7. Jaamacadda Twente Sikolaship (UTS)
Sidoo kale, kani waa mid ka mid ah 17-ka ugu wanaagsan ee si buuxda loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho ee injineernimada. Deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay ardayda ugu fiican ee ka socda EU / EEA iyo kuwa aan ka tirsaneyn EU / EEA. Sidoo kale. waxaa loogu talagalay kuwa codsanaya barnaamijka qalin-jabinta (MSc) ee Jaamacadda Twente.
Intaa waxaa sii dheer, laba deeq waxbarasho ayaa la siin karaa dadka qaata UTS. Waana deeqda waxbarasho ee Kipaji. Sidoo kale, iyo Professor de Winter Scholarship. Iyo, deeqaha waxbarasho waxay leeyihiin shuruudo dheeri ah.
Jaamacadda Twente, Netherlands
Ardayda caalamiga ah ee ka socota EU / EEA. Iyo wadamada aan ka tirsanayn EU / EEA
Qiimaha deeqda waxbarasho wuxuu u dhexeeyaa € 3,000 - € 25,000. Tani waa hal sano. Si kastaba ha noqotee, marka la eego barnaamijka daraasadda laba sano ah, ardaydu waxay heli karaan UTS dheeraad ah oo qaddar u dhigma kan sannadka ugu horreeya markay buuxiyaan shuruudaha nidaamka UTS.
Si aad ugu qalanto UTS, ogow:
Codsiga deeqda waxbarasho ee UT waa nidaam. Sidoo kale, way ka duwan tahay arjiga gelitaanka koorsada Jaamacadda Twente. Intaa waxaa sii dheer, iyadoon loo eegin maalgelinta, waxaad u baahan doontaa inaad marka hore hesho warqad gelitaan.
Sidoo kale, waa inaad (si ku meelgaar ah) laguu oggolaaday mid ka mid ah barnaamijyada u-qalmitaanka UT Master ee ka bilaabmaya sannad-dugsiyeedka 2020/2021 (Sebtember). Fadlan ogow: Kadib dhammeystirka dalabkaaga, waxay qaadan kartaa illaa 8 toddobaad kahor intaadan helin natiijooyinka.
Sidoo kale, waa inaad leedahay lambar arday.
Intaas waxaa sii dheer, waa inaadan ka qalinjabin barnaamijka qalin jabinta UT.
Sidoo kale, waa inaad u hoggaansanaanta shuruudaha helitaanka fiisaha soo galitaanka Nederland. Si kastaba ha noqotee, taasi waa haddii ay khuseyso.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad u hoggaansanaataa shuruudaha guud ee imtixaanka luqadda Ingiriisiga Tacliinta IELTS 6.5. Ama TOEFL iBT ee 90. Iyo 6.0 dheeraad ah (TOEFL iBT 20) oo ku saabsan kaabista xirfadaha hadalka
Sidoo kale, xaq uma lihid deyn waxbarasho oo Dutch ah.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad noqotaa arday aad u fiican. Caadi ahaan tani waxay ka dhigan tahay inaad ka tirsan tahay boqolkiiba 5 illaa 10 boqolkiiba fasalkaaga ugu wanaagsan.
Dhammaan codsiyada waxay furan yihiin 1 Febraayo 2021 Wareegga 2. Sidoo kale, si aad u dalbato deeqdan waxbarasho, waxaad horayba ugu baahan tahay in (si ku meel gaar ah) laguu oggolaado mid ka mid ah barnaamijyada u qalmidda Master-ka. Intaas waxaa sii dheer, codsiyada waxaa lagu sameeyaa khadka tooska ah.
Waqtiga kama dambaysta ah ee codsiyada Wareegga 1 waa 1 Febraayo 2021. Halka waqtiga kama dambaysta ah ee codsiyada Wareegga 2 ay tahay 1 Meey 2021.
Website-ka deeq waxbarasho oo rasmi ah: https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/
1 Feb / 1 May 2021 (sanadle). Sidoo kale, koorsadu waxay bilaabmaysaa Sebtember 2021.
8. Deeqda Holland ee loogu talagalay Ardayda aan Ardayga ahayn ee EEA
Sidoo kale, kani waa mid ka mid ah 17-ka ugu wanaagsan ee si buuxda loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho ee injineernimada. Deeqdan waxaa maalgeliya Wasaaradda Waxbarashada, Dhaqanka, iyo Sayniska ee Nederland. Sidoo kale, waxaa loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee ka baxsan Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA).
Waxaa loogu talagalay kuwa doonaya inay ku sameeyaan bachelor-ka ama mastarka mid ka mid ah jaamacadaha cilmi-baarista ee Nederlandka iyo jaamacadaha cilmiga xirfadeed ee Holland.
Deeqdani waxay daboolaysaa Barnaamijka Bachelor-ka ama Master-ka ee dhinacyada u-qalmitaanka daraasadda ee ay bixiyaan hay'adaha kaqeybgalaya.
Ardayda caalamiga ah ee ka baxsan ETA.
Deeqda waxbarasho ayaa gaareysa € 5,000. Sidoo kale, fadlan la soco in tani aysan ahayn deeq waxbarasho oo buuxda. Marka, deeqda ayaa la siiyaa hal sano. Waxaana la heli karaa hal mar oo keliya.
Si aad xaq ugu yeelatid, fadlan la soco tan:
• Jinsiyadaada waa inay ahaataa mid aan ahayn EEA.
• Sidoo kale, waa inaad codsaneysaa bachelor-ka buuxa ama kan mastarka. Tanina waxay ka dhacdaa mid ka mid ah kaqeybgalayaasha hay'adaha tacliinta sare ee Nederland.
• Intaas waxaa sii dheer, waa inaad buuxisaa shuruudaha gaarka ah ee hay'adda aad dooratay. Sidoo kale, waxaad ka heli kartaa kuwan websaydhka hay'adda.
• Intaa waxaa sii dheer, waa inaadan wax ka baranin xarun waxbarasho oo Nederland ah.
Waa inaad u codsatid deeqda waxbarasho ee Holland si toos ah hay'adda kaqaybqaadata ee aad dooratay. Sidoo kale, waqtiga kama dambaysta ah ee codsiyada waa 1 Febraayo 2020 ama 1 Maajo 2020.
Website-ka deeq waxbarasho oo rasmi ah: http://www.studyinholland.nl/scholarships/holland-scholarship
1 Feb / 1 May 2021 (sanadle). Sidoo kale, koorsadu waxay bilaabmaysaa 2021.
9. Heinrich Boll Deeqo waxbarasho oo Jarmalka loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Sidoo kale, kani waa mid ka mid ah 17-ka ugu wanaagsan ee si buuxda loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho ee injineernimada. Deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Kuwa ka helay aqoonsi gelitaan jaamacadeed dugsi ka baxsan Jarmalka. Oo yaa doonaya inuu barto Master ama Ph.D. Degree Jarmalka.
Jaamacado Dawladeed ama gobol laga aqoonsan yahay Jarmalka.
Deeqdani waxay ku wajahan tahay Degree Masters. Ama Ph.D. Degree dhammaan maadooyinka lagu bixiyo jaamacadaha gobolka ama dowladdu aqoonsan tahay ee Jarmalka. Sidoo kale, waxaa loogu talagalay ardayda Midowga Yurub. Sidoo kale koorsooyinka Degree-ga ee Master-ka ee gobolka ama jaamacadaha ay dowladdu aqoonsan tahay ee Jarmalka. Iyo, Switzerland, iyo wadamada kale ee xubnaha ka ah EU waa suurtagal.
Kooxda bartilmaameedka ahi waa ardayda caalamiga ah. EU iyo EU midna, oo aan wax ku baran Jarmalka.
Ardayda aan ka tirsaneyn Midowga Yurub: 850 XNUMX bishiiba. Iyo waliba gunooyin shaqsiyadeed oo kaladuwan. Sidoo kale, khidmadaha waxbarashadu waa kiisaska qaarkood ee suurtogalka ah Jarmalka.
Ardayda EU: Qaddarku wuu kala duwan yahay. Marka, waxay ku socotaa ugu badnaan € 649. Intaa waxaa sii dheer, oo lagu daray € 300 oo ah lacagta buugga bishiiba. Si kastaba ha noqotee, ujrooyinka wax lagu barto macquul kama ahan Jarmalka. Laakiin suurtagal illaa xad xaddidan waddamada kale.
Intaa waxaa sii dheer, deeqda waxbarasho ayaa la siiyaa muddada caadiga ah ee daraasadda. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa in lagu kordhiyo hal semester.
Ardayda aan ka tirsaneyn Midowga Yurub: 1,200 100 bishiiba. Oo lagu daray € XNUMX gunnada socodka bishiiba. Sidoo kale, oo lagu daro gunooyin shaqsiyadeed oo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, khidmadaha waxbarashadu suurtagal maaha.
Ardayda EU: 1350 100 bishiiba. Oo lagu daray € XNUMX bishiiba gunnada kharashka cilmi baarista. Sidoo kale, oo lagu daray khidmadaha wax lagu barto macquul kama ahan Jarmalka. Laakiin suurtagal illaa xad xaddidan waddamada kale.
Intaa waxaa sii dheer, deeqda waxbarasho waxaa la siiyaa laba sano sida caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa in la kordhiyo laba jeer ugu badnaan nus sano.
Ardayda Caalamiga ah ee Master-ka ee ku kasbaday shahaadadooda gelitaanka jaamacadda dibadda Jarmalka:
• Waa dalban karaa kahor intaadan bilaabin barnaamijka Masters-kaaga. Ama wakhti kasta ilaa dhamaadka simistarka koowaad ee barnaamijka Masters.
• Sidoo kale, caddeynta shahaadada koowaad ee xirfadeed waa in la keenaa.
Ardayda Dhakhaatiirta Caalamiga ah ee kasbatay shahaadada gelitaanka jaamacadda ee ka baxsan Jarmalka:
Codsaduhu waa inuu u aqbalay inuu yahay ardayga dhakhaatiirta jaamacad dawladeed ama gobol laga aqoonsan yahay Jarmalka. Sidoo kale, caddeynta gelitaanka, sida caadiga ah Jarmalka, waa in lagu daraa arjiga.
Intaa waxaa sii dheer, taariikhda arjiga, shaqada hordhaca ah waa in la dhammaystiray. Iyo jadwal ansax ah oo dhameystir ah waa in la soo gudbiyaa.
Sidoo kale, maaddooyinka PhD-da ee la xiriira qodobbada aasaasiga ah ee waxqabadyada aasaasiga ah ayaa la siin doonaa mudnaanta.
Faahfaahinta shuruudaha dalabyada iyo nidaamyada, fadlan la tasho xaashida macluumaadka 1-1 or A 2-1. Xariirka arjiga ee internetka ayaa xirmaya 1 Maarso ugu dambeyntii.
Website-ka deeq waxbarasho oo rasmi ah: https://www.boell.de/en/foundation/application
1 Maarso (sanadle). Sidoo kale, koorsada xigta waxay bilaabmaysaa 2021.
10. Deeqda waxbarasho ee DAAD ee Jarmalka ee Koorsooyinka Postgraduate-ka ee La xiriira Horumarinta
Deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay ardayda ka qalin jabisay dibadda. Iyo kuwa ka socda horumarka iyo wadamada warshadaha cusub. Sidoo kale, waxay jareen dhammaan cilmiga. Iyo ugu yaraan laba sano oo khibrad xirfadeed ah.
Sidoo kale, waxay bixiyaan fursad ay ku qaataan shahaadada sare ama shahaadada Masterka. Tani waxay ka dhacdaa jaamacad Jarmal ah oo dowlad-goboleed aqoonsan tahay. Iyo xaalado gaar ah oo lagu qaato shahaadada dhakhtar. Sidoo kale, si loo helo aqoonsi jaamacadeed (Master 's / PhD) Jarmalka.
Jaamacadaha Jarmalka oo bixiya koorsooyin jaamacadeed oo la xiriira horumarka
Waxay daboolayaan Masters ama Ph.D. koorsooyinka Cilmiga Dhaqaalaha / Maamulka Ganacsiga / Dhaqaalaha Siyaasadeed. Sidoo kale, Iskaashiga Horumarinta. Iyo Injineerinka iyo Cilmiga la xiriira.
Intaa waxaa sii dheer, Xisaabta, Qorshaynta Gobollada iyo Magaalada. Iyo Cilmiga Beeraha iyo Dhirta. Intaa waxaa sii dheer, Sayniska dabiiciga iyo deegaanka. Intaa waxaa sii dheer, Daawada iyo Caafimaadka Dadweynaha. Cilmiga bulshada, waxbarashada iyo sharciga iyo barashada warbaahinta.
Dhalinyaro xirfadlayaal ah oo ka socda wadamada soo koraya.
Deeqaha waxaa ka mid ah bixinta bil kasta ee 850 euro. Tanina waxaa loogu talagalay ardayda qalin jabisay. Ama 1,200 euro oo loogu talagalay musharrixiinta takhasuska leh. Sidoo kale, lacag bixinta xagga caafimaadka, shilka, iyo caymiska mas'uuliyadda shaqsiyeed waa la daboolay. Iyo gunnada safarka. Ilaa iyo inta kharashaadkan ay daboolayaan dalka hooyo ama ilo kale oo dhaqaale.
Muddada deeqda waxbarasho waa 12 illaa 24 bilood. Si kastaba ha noqotee, tani waxay kuxirantahay hay'ad gaar ah oo loogu talagalay Masters iyo 36 bilood oo loogu talagalay Ph.D.
Si aad xaq ugu yeelatid, fadlan ogow:
Waxay u shaqeysaa midkood hay'adaha dowliga ah. Ama shirkad dawladeed ama shirkad gaar loo leeyahay oo ka jirta waddan soo koraya. Iyo, sida oo kale, waxay ku hawlan tahay qorsheynta iyo fulinta awaamiirta. Sidoo kale, iyo mashaariicda xoogga la saarayo siyaasadaha horumarinta ee ku leh teknolojiyadda, dhaqaalaha, ama dhinacyada bulshada.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad haysataa shahaadada Bachelor-ka maaddo la xiriirta.
Sidoo kale, waa inuu dhammaystiray shahaado tacliimeed. Tani waxay ku jirtaa natiijooyin aad uga sarreeya celcelis ahaan. Iyo ugu yaraan ugu yaraan laba sano oo khibrad xirfadeed ah oo laxiriira ka dib shahaadada koowaad.
Intaa waxaa sii dheer, shahaadooyinkaaga tacliimeed waa inaysan caadi ahaan ka badnaan lix sano.
Koorsooyinka waxbarasho ee Jarmalka: Deeqda waxbarasho waxaa ka mid ah koorso 6 bilood ah oo luqadda Jarmalka ah. Iyo ku guuleysiga imtixaanka luqadda DSH 2 ama TestDaF 4 kahor bilowga koorsada daraasadda. Marka, heerka ugu yar ee luqadda Jarmalka ee B1 waqtiga codsiga waa shuruud. Sidoo kale, waxay u baahan tahay in lagu caddeeyo iyadoo la siinayo caddeyn.
Koorsooyinka ku baxa Ingiriisiga: Shahaadada IELTS (Band 6) ama TOEFL (dhibcaha ugu yar: 550 warqad ku saleysan, 213 kumbuyuutar ku saleysan, 80 internet ku saleysan)
Codsiyada waa in si toos ah loogu sameeyaa koorsada la xiriira. Sidoo kale, fadlan tixraac websaydhada koorsada ee nidaamka dalabka.
Website-ka deeq waxbarasho oo rasmi ah: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=190&subjectGrps=F&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50076777
Aug-Oct 2020 (sanadle). Sidoo kale, koorsada xigta waxay bilaabmaysaa AY 2021/2022.
11. Barnaamijka Orange ee Aqoonta ee Nederland
Sidoo kale, kani waa mid ka mid ah 17-ka ugu wanaagsan ee si buuxda loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho ee injineernimada. Waxay ujeedadeedu tahay inay horumariso horumarka awoodda. Sidoo kale, aqoonta iyo tayada labada shaqsi. Iyo sidoo kale ururo labadaba dhanka tacliinta sare iyo xirfadaha. Iyo dhinacyada kale ee laxiriira mowduucyada mudnaanta leh ee kujira wadamada barnaamijka.
Jaamacadaha Nederlandka ee bixiya barnaamijyo / koorsooyin u qalma OKP.
Deeqaha ayaa loo heli karaa xulashada koorsooyinka gaagaaban. Iyo barnaamijyada sayidkiisa.
Qiimaha Deeqda / Ka-saarista
Deeqda waxbarasho ee OKP waxaa loogu talagalay in lagu kabo mushaharka ay tahay inaad sii wadato helitaanka inta lagu jiro muddada deeqda waxbarasho. Sidoo kale, waa tabaruc xaga kharashyadaada nolosha ah. Iyo kharashyada sida khidmadaha waxbarashada iyo fiisada. Sidoo kale, safarka, caymiska, iwm.
Intaas waxaa sii dheer, waa inaad dabooshaa farqiga u dhexeeya qadarka deeqda waxbarasho ee OKP iyo kharashyada dhabta ah ee naftaada.
Waxaad ka heli doontaa shuruudaha u-qalmitaanka halkan link.
Waxaad ubaahantahay inaad si toos ah uga codsato machad tacliinta sare ee Nederland ah dookhaaga. Sidoo kale, la xiriir hay'adda tacliinta sare ee Nederland. Waxay bixisaa koorsada u qalma OKP ee aad dooratay ee ku saabsan habraacyada dalabka.
Sidoo kale, hay'adda Nederland waxay ku siin kartaa macluumaad dheeraad ah. Tani waxay ku jirtaa tallaabooyinka kala duwan ee ku lug leh arjiga. Iyo habraacyada xulashada, iyo sidoo kale shuruudaha u-qalmitaanka.
Wareegyada codsiyada 3 ee loogu talagalay deeqaha waxbarasho ee shakhsiyadeed waa 5 Febraayo-24 Maarso: Dhammaan koorsooyinka gaagaaban iyo barnaamijyada mastarka. Sidoo kale, 13 Meey-30 Juun: Dhammaan koorsooyinka gaagaaban iyo barnaamijka mastarka oo leh mudo 12-bilood ah. 2 Sebtember-13 Oktoobar: Koorso gaaban oo keliya.
Waa muhiim in la akhriyo Macluumaadka OKP ee codsadayaasha.
Website-ka deeq waxbarasho oo rasmi ah: https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/orange-knowledge-programme
24 Mar / 30 Juun / 13 Okt. Sidoo kale, koorsadu waxay bilaabmaysaa 2021/2022.
12. Westminster International Postgraduate Deeq waxbarasho oo buuxda
Sidoo kale, kani waa mid ka mid ah 17-ka ugu wanaagsan ee si buuxda loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho ee injineernimada. Intaa waxaa sii dheer, deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay ardayda ka socota dalalka soo koraya. Kuwa doonaya inay wax ka bartaan shahaadada masters-ka ee jaamacadda.
Jaamacadda Westminster, Boqortooyada Ingiriiska.
Barnaamij kasta oo Master ah oo waqti-buuxa ah oo lagu bixiyo Jaamacadda Westminster marka laga reebo MBA.
Waxay kuxirantahay dhaafitaanka khidmada waxbarashada oo buuxa. Sidoo kale, hoy. Iyo kharashaadka nolosha iyo duulimaadyada ka baxa ama ka baxa London.
Waa inaad noqotaa arday caalami ah oo ka socda wadan soo koraya.
Sidoo kale, waa inaad haysataa dalab shahaadada masters-ka oo buuxa ah ee Jaamacadda Westminster.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad haysataa shahaadada sharafta heerka koowaad.
Sidoo kale, waa inuu kujiraa baahi dhaqaale iyo karti horumarineed.
Booqo websaydhka deeqda waxbarasho ee rasmiga ah faahfaahinta dalabka: https://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/westminster-international-postgraduate-full-scholarship
29 Meey 2020 (sanadle). Sidoo kale, koorsada xigta waxay bilaabmaysaa Sebtember 2020.
13. Deeqda waxbarasho ee Dawladda Japan ee Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadeed
Sidoo kale, kani waa mid ka mid ah 17-ka ugu wanaagsan ee si buuxda loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho ee injineernimada. Wasaaradda Waxbarashada, Dhaqanka, Ciyaaraha, Sayniska, iyo Teknolojiyada (MEXT) waxay siisaa deeqo waxbarasho ardayda caalamiga ah. Kuwa doonaya inay wax ku bartaan jaamacadaha Japan iyagoo ah arday shahaadada koowaad ka hooseysa Barnaamijka Deeqda waxbarasho ee Dowladda Japan (MEXT) ee 2020.
Muwaadiniinta waddamada xiriirka diblomaasiyadeed la leh dowladda Japan.
Faa'iidooyinka deeqda waxbarasho / Joogtaynta:
Deeqda waxbarasho waxaa ka mid ah waxbarashada iyo ujrooyinka kale. Sidoo kale, waxay daboolaysaa gunno ah 117,000 yen bishiiba. Intaa waxaa sii dheer, bil kasta oo gunno ah 2,000 ama 3,000 yen ayaa la siin karaa kuwa ku hawlan daraasadda ama cilmi baarista gobollada sida gaarka ah loogu talagalay. Sidoo kale, kharashka safarka ee looga baxayo ama looga tagayo Japan.
Muddada deeqda waxbarasho waxay socon doontaa shan sano. Tani waa laga bilaabo Abriil 2020 illaa Maarso 2025. Sidoo kale, oo ay ku jiraan waxbarashada diyaarinta ah ee hal sano ah ee luqadda Jabbaan. Iyo maadooyinka kale ee la bixinayo markay yimaadaan Japan.
Hesho macluumaad dheeraad ah halkan: https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/__icsFiles/afieldfile/2019/04/17/scholarships_2019_e.pdf
14. Abaalmarinta Shahaadada Caalamiga ah ee Singapore
SINGA waa abaalmarin la siiyo ardayda caalamiga ah. Sidoo kale, waxaa loogu talagalay kuwa leh shahaadada koowaad ee tacliinta sare iyo / ama natiijooyinka mastarka. Intaa waxaa sii dheer, waxaa loogu talagalay kuwa xiisaha xoogan leh. Tani waxay ku jirtaa sameynta cilmi baaris u horseedaysa dhakhtar (Ph.D.) sayniska iyo injineernimada ee Jaamacadda Singapore.
Ph.D. Barnaamijyada Sayniska Biyomediga iyo Sayniska Jirka iyo Injineerinka.
Qiyaastii 240 sanadkiiba.
Abaalmarinta waxay bixisaa taageero maaliyadeed illaa 4 sano oo ah Ph.D. waxbarashada. Sidoo kale, oo ay ku jiraan khidmadaha waxbarashada oo buuxa. Iyo gunno bille ah, gunnada dejinta, iyo deeqda duulimaadka.
Waxay u furan tahay dhammaan ardayda caalamiga ah.
Sidoo kale, waa inaad ku qalin jabisaa xiisaha cilmi baarista. Waana inuu leeyahay natiijooyin tacliimeed oo heer sare ah
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad lahaataa xirfado wanaagsan oo ku qoran Ingiriisiga iyo ku hadalka.
Intaas waxaa sii dheer, waa inaad kaheshaa warbixin wanaagsan garsoorayaasha tacliinta.
Codsiyada waxaa lagu sameeyaa khadka tooska ah.
Hesho macluumaad dheeraad ah halkan: https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore-International-Graduate-Award-SINGA
1 Juun 2020 (sanadle). Sidoo kale, koorsada xigta waxay bilaabmaysaa Jan 2021.
15. Barnaamijka Caalamiga ah ee Tacliinta Sare ee Taiwan
Deeqdani waxay ujeedadeedu tahay inay gacan ka geysato iskaashiga dalalka soo koraya. Waa in lagu gaaro horumar waara iyadoo loo marayo waxbarashada. Sidoo kale, waxay siisaa deeqo waxbarasho sare. Oo waxay soo saartay shahaadada koowaad, qalinjabinta, iyo Ph.D. barnaamijyada. Tani waxay iskaashi la leedahay jaamacado caan ah oo caan ah oo ku yaal Taiwan.
Waxay daboolaysaa shahaadada koowaad, Qalinjabinta, iyo Ph.D. barnaamijyada. Sidoo kale, waxay daboolaysaa kuwa la xiriira Sayniska iyo Teknolojiyada. Intaa waxaa sii dheer, Injineerinka, Caafimaadka Dadweynaha, iyo Daawada. Iyo Horumarinta Beeraha Waara. Intaa waxaa sii dheer Bini'aadamka iyo Cilmiga Bulshada. Sidoo kale, Horumarinta Qeybaha Gaarka loo leeyahay.
Booqo Websaydhka wixii faahfaahin dheeraad ah: http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
15 Maarso 2020 (sanadle). Sidoo kale, koorsadu waxay bilaabmaysaa Sebtember 2020.
16. Deeqda Achievement Commerce ee Jaamacadda Melbourne.
Barnaamijku wuxuu ujeedkiisu yahay in lagu abaalmariyo ardayda waxqabadka sare leh ee bilaabaya Bachelor of Commerce, Ganacsiga / Juris Doctor Package Package ama Ganacsiga / Injineernimada Shahaadada.
Jaamacad ama Urur: Jaamacadda Melbourne
Heerka Koorsada: Imtixaanka shahaadada
Award: Illaa $ 26,500
Tirada Abaalmarinta: 40
Abaalmarinta waa la qaadan karaa Australia
Si loo gaaro abaalmarintan, codsadayaashu waa inay qaataan gelitaanka Melbourne. Sidoo kale, ka dib, ardayda ayaa si otomaatig ah loogu tixgelin doonaa fursadda. Intaas waxaa sii dheer, xulashada waxaa lagu sameeyay iyadoo lagu saleynayo mudnaanta aqooneed.
U qalma inuu codsado shahaadada koorsada qalin-jabinta arday kasta wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo gelitaanka shuruudaha. Sidoo kale, qaadashada gelitaanka, musharrixiinta inta badan waxay u baahan doonaan inay la kulmaan wax ku oolnimada luuqadda Ingiriisiga ee jaamacadda.
Deeqda ayaa bixineysa gunno nololeed oo dhan $ 8,000. Tanina waa sanadkii sanadkiiba 3 sano. Sidoo kale, waxaa lagu bixiyaa laba $ 4,000 qaybood bishii Abriil iyo Sebtember iyo deeqda safarka ee lagu qiimeeyay $ 2500.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo Codso Hada
17. UQ Newcrest oo ay maalgeliso International Ph.D. Deeqda waxbarasho ee Hydrometallurgy, 2021
Barnaamijku wuxuu diyaar u yahay inuu qaato Ph.D. shahaadada jaamacadda Queensland. Sidoo kale, barnaamijka maalgelinta wuxuu bixiyaa $ 28,092. Oo kanuna waa sanadkiiba ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ahba sanad dugsiyeedka 2020-2021.
Waxaa la aasaasay 1909, Jaamacadda Queensland waa mid ka mid ah jaamacadaha hormuudka u ah Australia. Sidoo kale, waxay bixisaa isku-dubbaride, bachelor, mastar, dhakhtar, iyo darajooyin sare. Oo waxaa lagu qiimeeyaa sida 48th jaamacadda ugu caansan adduunka.
Jaamacad ama Urur: Jaamacadda Queensland
Heerka Koorsada: PhD
Award: $ 28,092 sanadkii
Tirada Abaalmarinta: Lama yaqaan
Jinsiyada: Gudaha & Caalamiga
Dalal uqalma: Codsiyada waxaa laga aqbalaa adduunka oo dhan.
Koorso La Aqbali karo ama Maado: Deeqda waxbarasho waxaa lagu bixiyaa maadada Injineerinka iyo Xisaabinta.
Shuruudo La ogolaan karoSi aad xaq ugu yeelatid, codsadayaashu waa inay la kulmaan shuruudaha soo socda:
Sidoo kale, shahaadada koowaad ee bachelor-ka oo leh ugu yaraan maamuus fasalka IIA ama u dhigma jaamacadaha la oggolaaday, oo ay ku jiraan qayb cilmi baaris ku habboon; ama
Shahaadada mastarka cilmi-baarista; ama
Sidoo kale, shahaadada mastarka shaqada koorsada iyo guud ahaan GPA (celceliska dhibcaha dhibcaha) oo u dhiganta 5.65 ee 7-dhibic UQ cabirka, oo ay ku jiraan qayb cilmi baaris ku habboon; ama
Shahaadada jaamacadeed ee ugu yaraan hal sano oo waqti buuxa ah oo u dhiganta guud ahaan GPA (celceliska dhibcaha dhibcaha) oo u dhiganta 5.0 ee 7-dhibic UQ, oo ay weheliso khibrad cilmi baaris oo la soo bandhigay oo u dhiganta sharafta IIA ayaa loo tixgelin doonaa Ph.D. gelitaanka kiis kiis kiis; ama
Shahaadada bachelor-ka oo lagu daro ugu yaraan laba sano oo khibrad cilmi-baaris ah oo la diiwaangeliyey, oo ay ku jiraan daabacaadda cilmi-baarista.
Turkiga Shahaadada Jaamacadeed iyo Shahaadada Jaamacadeed
HEC Deeqaha Pakistan Cusboonaysiinta 2021/2022
Jaamacadda Sterling Commonwealth Deeqaha La Wadaago
Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed ee Nigeria 2021/2022
DESOPADEC Abaalmarinta Shahaadada Jaamacadeed ee 2021/2022
Sida loo Codsado: Si loo tixgeliyo codsigan, codsadayaashu waa inay qaataan gelitaanka Ph.D. by barnaamijka cilmi baarista ee jaamacadda. Intaas ka dib, dhammaan musharrixiinta waa inay email ugu diraan dukumiintiyada soo socda Associate Professor James Vaughan ([emailka waa la ilaaliyay]).
Taageerida Dukumentiyada: Codsadeyaashu waa inay soo gudbiyaan warqadda daboolka, CV, iyo qoraallada tacliinta ee codsiyadooda.
Shuruudaha Ogolaanshaha: Si loo dalbado fursadda, codsadayaashu waxay u baahan doonaan inay buuxiyaan shuruudaha gelitaanka tacliimeed ee shahaadada sare ee cilmi baarista.
Shuruudaha Luqadda: Codsadayaasha ka yimid dalka dibadiisa waxay badanaa u baahan doonaan inay buuxiyaan shuruudaha gaarka ah ee luqadda Ingiriisiga si ay ugu awoodaan inay wax ku bartaan jaamacadda.
Deeqdani waxay bixisaa $ 28,092 sanadkiiba canshuur la'aan, sanadkiiba waxaa lagu muujiyaa kalfadhiga tacliinta 2020-2021.
ugu dambaysa ee arjiga
Maarso 31, 2021.
Waxyaabaha kor ku xusan waa qaar ka mid ah 17-ka ugu wanaagsan ee injineernimada si buuxda loo maalgaliyo deeq waxbarasho. Raac xiriiriyeyaasha kor ku xusan oo codso. Nasiib wacan.
GSUTECH Transcript iyo Tilmaamaha Codsiga Tilmaamaha Codsiga
Tilmaamaha Codsiga ee Hubinta UNILAG
Saameynta Aasaasiga Waalidka ee ku-barashada Xirfadaha Xirfadaha Gabdhaha-Ilmaha ee Dugsiyada Sare ee Junior ee Gobolka Kaduna, Nigeria
Shaqooyinka Wadista ee Lagos 2021 Hubi Cusbooneysiinta Shaqaaleynta Julaay
www.inec.gov.ng Foomka Shaqaalaynta 2021/2022 Xariirka Codsiga
Liiska Dalalka Yurub ee Heerka Shaqaalaynta 2021 Cusboonaysiinta
Jaamacadda Surrey Newton Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed ee 2018 ee loogu talagalay Ardayda UK iyo EU
« Barashada Jarmalka Deeq waxbarasho oo dhameystiran 2021 Xariirka Foomka Codsiga
7 Ugufiican Waxaan Rabaa Inaan Dibedda Ugu Barto Deeqo Bilaash Ah 2021/2022 Portal »